Umqondo ibhokisi Holm sika | Holmbygden.se
Ingabe unayo kuwumqondo omuhle – ezinkulu nezincane?
Kungenzeka into ocabanga ukuthi ibe neqhaza Countryside eziphilayo Holm noma yimuphi omunye ohlakaniphile. Kuphela imikhawulo umcabango…
Ndawonye, ​​thina imibono nje okuhle okuningi. Imibono olunikezwe lapha kungase isib. esetshenziswa njengoba isisekelo imihlangano ahlukahlukene ku ukuthuthukiswa Holms – ukuthi ungakwazi iqhaza. Ingase futhi ibe ngendlela yekutsi HBU ekwazi nokulungisa noma bounce ngakwesokudla. Unganqikazi uxhumane nathi noma, Ayikho isiphakamiso uyisiphukuphuku kakhulu!
Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe nesandla umqondo wami?
Indlela elula iwukusebenzisa ifomu lethu ngakwesokudla. Gcwalisa emabhokisini bese uthumela, ecacile! Ungathanda sicela unamathisele noma yiliphi ifayela, umqulu noma isithombe isiphakamiso sakho, kanti futhi kuhle.
Kungenzeka futhi ukuba imeyli nathi uma esifanelana kangcono: info@holmbygden.se.
Ingabe ufuna ukuhlala bengaziwa?
Kuyinto Yebo ezifiselekayo uma ufuna ukusitshela ukuthi ungubani, kodwa kungase futhi bahlale bengaziwa.
Vill du kanske bara vara kontaktbar för Holmbygden.se (#ShepherdsHut), kepha akwaziwa kwangaphandle nge isiphakamiso sakho futhi okuhle. Uma ikhona, ibhale ngezansi “Ukuxhumana Siqu”. Thumela umbono wakho ngokusebenzisa iwebhusayithi.
Zonke iziphakamiso wamukelekile.
Isihloko umbono wakho:*
umyalezo Siqu kumphathi wewebhusayithi:
Namathisela Ifayela ngezansi:
Usayizi wefayela omkhulu: 25mb.
e 2 (usebenzise ifomu izikhathi eziningana uma kunesidingo):
Utsättning av snökäppar längs strä... Funda kabanzi